Tena tsotra io kaontera varavaranamandeha amin'ny batterie ihany. Betsaka amin'ny antsika Kaontera eo am-baravarana dia vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasana anao amin'ny antsipiriany momba ny anay kaontera eo am-baravarana.
Ny isan'ny fikorianan'ny mpandeha no mpitondra lehibe indrindra eo amin'ny tsena amin'izao fotoana izao. Eo ambanin'ny fitaoman'ny toerana ara-jeografika, ny tontolo iainana, ny fifamoivoizana ary ny anton-javatra hafa, ny fandalinana sy ny antontan'isa momba ny isan'ireo fikorianan'ny mpandeha dia azo tanterahina ara-tsiansa sy mahomby, ary ny fanapaha-kevitra momba ny asa eo amin'ny tsena iray manontolo dia azo alaina ara-potoana, izay nanjary fanatsarana. Ny andraikitry ny maodelin'ny orinasam-barotra, ny fampiasana fomba siantifika hanangonana angon-drakitra momba ny fivezivezena amin'ny mpandeha dia fomba iray ahazoana ny fotoana mety amin'ny orinasa amin'ny tsena iray manontolo.
Ny kaontera varavarana HPC001 dia fitaovana manisa amin'ny fanisana ny fivezivezan'ny mpandeha. Kely sy maivana ary mora apetraka izy io. Manome fitantanana angon-drakitra feno ihany koa izy io. Mba hamaliana ny filan'ny mpanjifa isan-karazany dia apetraka sy ampiasaina amin'ny fivarotana lehibe, toeram-pivarotana ary ny vavahady fivarotana rehetra. Developed, HPC001 kaontera eo am-baravaranadia afaka manisa mora foana ny isan'ny fivezivezena amin'ny mpandeha isaky ny andro, izay mety raha hanome referansy voarindra ireo mpivarotra. Amin'ny alàlan'ny fanovana ny fivezivezin'ny mpandeha, azo zaraina ara-dalàna ny faritra iray manontolo, azo alamina tsara ny loharanon'olombelona, ​​ary azo fehezina ny vidin'ny toeram-pivarotana sy ny fivarotana lehibe. Amin'ny fampitahana ny fivezivezena amin'ny mpandeha amin'ny vanim-potoana samihafa dia azo ahitsy ny paikadim-barotra sy ny fampiroboroboana izay mampitombo be ny tombontsoan'ny supermarket. Izy io dia mety amin'ny toerana fivarotana, toerana ara-kolontsaina sy fanatanjahantena, toerana fialamboly, toerana ho an'ny besinimaro ary toerana hafa.
Toetoetran'ny kaonteram-baravaran'ny HPC001
1. HPC001 kaontera varavarana dia Miaraka amin'ny fiteny miasa roa, Sinoa sy Anglisy.
2. efijery LCD 1,15 santimetatra.
3. Ny kaontera eo am-baravarana ny bateria dia azo soloina isaky ny enim-bolana ho an'ny fandidiana, izay mety sy tsotra.
4. Famaritana sy fitantanana mety, izay azo alefa amin'ny bokotra eo amin'ny kaontera.
5. Ny kaontera varavarana Mila manao fitantanana counter fotsiny amin'ny alàlan'ny Windows, tsy mila rindrambaiko fanampiny.
6. Kely kely (113 * 67 * 20 mm) ary lanja maivana 213 grama.
7. Ny jiro amin'ny kaontera eo am-baravarana hazava ny seho rehefa misy mandalo.
8. Hipoitra avy hatrany ny fampisehoana rehefa ambany ny bateria.
9. Hiseho avy hatrany ny fampisehoana rehefa malemy ny famantarana.
10. Manisa isa mazàna ao anatin'ny 2.5 metatra, saingy azo havaozina ho 9 metatra tsy misy fanelingelenana.
11. Ny kaontera eo am-baravarana ny fitadidiana anatiny dia afaka mitahiry firaketana farafahakeliny 500 ora.
12. Fototra vita amin'ny plastika sy fitaovana iaraha-miasa dia azo fidina araka ny sitrapony.
13. Ny kaontera eo am-baravarana Ny data dia azo alaina amin'ny daty sy ora.
Manana karazana IR maro isika kaontera varavarana, 2D, 3D, AI mpanohitra ny varavarana, misy hatrany izay mety aminao, azafady mba mifandraisa aminay, hanoro ny mety indrindra izahay kaontera varavarana ho anao ao anatin'ny 24 ora.
Ny vavahady MRB dia mifanohitra amin'ny horonan-tsary HPC005
Teo aloha: Ny olona mandeha ho azy MRB dia mifanohitra amin'ny HPC005S
Manaraka: Kaontera fifamoivoizana MRB ho an'ny olona antsinjarany manisa HPC002
Vahoaka mpanohitra ny matevina
Kaonteram-baravarana tsy mitongilana
Manisa ny olona amin'ny vatan-kazo tsy matevina
Mpanohitra olona bezabe infrared